Kubvunzana naMark Shuttleworth kuDebConf (2011) | Kubva kuLinux
Kuverenga iyo blog ye Raphael Ndinosangana ne indavhiyu zvaakaita Maka Shuttleworth, Ini ndinokurudzira chaizvo kubvunzurudzwa, nekuti kune zvinonakidza chokwadi nezvaMark, pamwe nemifungo yaainayo, ramangwana re Canonical y Ubuntu, uye maonero ako ekuti nyika irikufamba sei uye kupi.
Ini ndinokusiira iwe kududzirwa kweiyi bvunzurudzo, yakaitwa nababa vangu (aka Yuri516) saka, hazvidiwe kuti uzviongorore, anoziva chiRungu zvakawanda kupfuura zvandinoita, hapazovi nezvikanganiso HAHA.
Iwe haufanire kuzivisa Mark Shuttleworth… anga atove mugadziri weDebian paakazove mamioneya mushure mekutengesa Thawte kuVerisign muna1999. Zvino muna 2002 akazove wekutanga wemuAfrica (uye wekutanga muDebian mugadziri) kufamba kunzvimbo. Makore maviri gare gare, akawana imwe chirongwa chikuru chekutevera: kuunza hutongi hweMicrosoft kumagumo neimwe nzira yekushandisa inonzi Ubuntu (ona bug # 2).
Ndakasangana naMark panguva yaDebconf 6 muOaxtepec (Mexico), isu tese tiri kuyedza kutsvaga nzira dzekuwedzera kubatana pakati paDebian naUbuntu. Zvishoma zvandinogona kutaura ndezvekuti Mako akaomesa musoro, asi chero mutungamiriri anowanzo, uye anozvisarudzira kunyanya! 🙂
Verenga pamusoro kuti uwane maonero ake pahukama hweUbuntu-Debian uye nezvimwe zvakawanda.
Raphael: Ndiwe ani?
Mako: Pamwoyo, ini ndiri muongorori, muvambi, uye nyanzvi. Iko shanduko muhunyanzvi, nzanga uye bhizinesi ndizvo zvinondinakidza, uye ini ndinopedza ingangoita nguva yangu yese neupfumi ndichikurudzira shanduko munzira yandinotarisira kuti ichavandudza nzanga uye nharaunda.
Ndine makore makumi matatu nemasere, ndakadzidza masystem emari uye mari paUniversity yeKapa. "Imba yemwoyo wangu" iri Cape Town, uye ini ndakagara imomo uye muStar City uye muLondon, ikozvino ini ndinogara muIsle of Man nemusikana wangu Claire uye gumi nemana madhadha ekutanga. Ini ndaive ndichibatana naDebian kwakatenderedza 38 nekuti ini ndaibatsira kumisikidza mawebhu webhu emapoka mazhinji sezvinobvira, uye ndakafunga maitiro aDebian ekurongedza aive akanaka asi anga asina kupakatira Apache. Mumazuva iwayo maitiro eNM aive nyore nyore 😉
Raphael: Chii chaive chako chekutanga kukurudzira pawakasarudza kugadzira Ubuntu 7 makore apfuura?
Mako: Ubuntu yakagadzirirwa kuzadzisa chiroto chekuchinja; kutenda kwekuti kugona kwemahara software kunokanganisa zvakanyanya hupfumi hwesoftware pamwe nehunyanzvi hwayo. Zviripachena kuti iyo tech nyika inokurudzirwa zvakanyanya neLinux, GNU, uye yemahara software ecosystem, asi iyo economics yesoftware ichiri yakafanana.
Pamberi peUbuntu, taive nenyika mbiri dzeLinux: Paive nenzvimbo yepasi rose (Debian, Fedora, Arch, Gentoo) kwawakazvitsigira, nenyika inorambidza, yeRHEL uye SLES / SLED. Nepo kugoverwa kwenharaunda kuchikosheswa zvakanyanya, hazviite uye hazvigone kuzadzisa zvido zveruzhinji; haugone kuvawana vakafanogadzwa, haugone kuwana chitupa uye kuvaka basa rakakomberedza, haugone kutarisira pachikoro kukwirisa chikuva chisina kukomborerwa nemasangano akasiyana siyana. Uye kugoverwa kwenharaunda hakugone kuumba masangano ekugadzirisa izvo.
Ubuntu inounza iwo maviri epasi pamwechete, seyakazara, neyekutengesa-giredhi kuburitswa (kugara nhaka yezvinhu zvakanaka zveDebian) iyo inowanikwa zviripachena asi zvakare inotsigirwa nesangano.
Kiyi yeiyo kurota inyaya yehupfumi, uye semazuva ese, shanduko mune yehupfumi mamiriro; Zvaive pachena kwandiri kuti kuyerera kwemari kwakatenderedza software yega yega kwaizobva pakupa marezinesi ("kutenga Windows") kuenda kumasevhisi ("kubhadhara yako yekuchengetera paUbuntu ONE"). Kana shanduko iyi yaiuya, ipapo panogona kunge paine mukana wechokwadi yemahara yakavhurwa sosi yekuparadzira software pamwe nesangano rinogona kuita zvese zvinokanganisa zvinodiwa kuti zvienderane nenyika yekutengesa Linux. Uye ndiko kungave kuzadzikiswa kwehupenyu hwese. Saka ndakafunga kupira chidimbu chehupenyu hwangu mukuyedza, uye ndikawana vanhu vakanaka vanoverengeka vakagovana chiratidzo ichocho chekubatsira pakuedza.
Zvakaita zvine musoro kwandiri kuti ndiise Debian muchiratidzo ichocho; Ini ndaizviziva mushe semushandisi uye senhengo, uye ini ndaitenda kuti ichagara iri yakaoma pane yekuparadzirwa kwenharaunda. Ini ndinogovana iyo Debian tsika uye iwo maitiro anoenderana neayo isu atakaisa kuUbuntu.
Debian pachayo, sesangano, haigone kuve mudiwa weindasitiri kana bhizinesi. Iwo mabhunzi akajeka, asi kudhirowa institution yekuzvimiririra kunosanganisira kuve mumwe akaomarara anopinza mukana, kana chibvumirano mupi. Zvinenge zvisingakwanise kuzadzisa zvinangwa zvekutanga-kumisikidza, kupihwa chitupa, uye rutsigiro rwechitatu-bato Hardware uye software mukati mechirongwa chakagadzirirwa kusarerekera, kusasarura, uye rusununguko.
Zvisinei, masangano maviri anowirirana anogona kuvhara mativi ese emari iyi.
Saka Ubuntu ndiyo yechipiri hafu yeiyo yakazara Debian-Ubuntu ecosystem. Simba raDebian rinokwenenzvera iwo eUbuntu, Ubuntu anokwanisa kuwana zvinhu izvo Debian asingakwanise (kwete nekuti nhengo dzayo hadzigone, asi nekuti chinzvimbo chakasarudza zvimwe zvinokosheswa) uye zvakapesana, Debian inounza zvinhu izvo Ubuntu zvisingakwanise, kwete nekuti nhengo dzayo hadzigone, kana zvisiri nekuti inosarudza zvimwe zvakakosha senzvimbo.
Vanhu vazhinji vari kutanga kunzwisisa izvi: Ubuntu museve waDebian, Debian uta hwaUbuntu. Hapana chiridzwa chinonyanya kubatsira pachayo, kunze kwekunge anthropology museum 😉
Saka hunhu hwakanyanya uye hunoshungurudza hunouya kubva kune avo vanofunga kuti Debian neUbuntu vanokwikwidza. Kana iwe uine hanya neDebian, uye uchida kuti ikwikwidze pamatanho ese neUbuntu, uchave unosuwa; iwe unoda kuti Debian arasikirwe nehumwe hwayo hunhu hwakanakisa uye achinje mamwe emamwe maitiro ayo akakosha. Nekudaro, kana iwe ukaona iyo Ubuntu-Debian ecosystem senge yakabatana izere, iwe uchapemberera masimba uye kubudirira kwezvese zviri zviviri, uye zvakanyanya kukosha, iwe uchashanda kuita kuti Debian ive iri nani Debian uye Ubuntu ive nani Ubuntu, zvinopesana nekushuvira kuti Ubuntu yaive yakafanana neDebian. uye zvinopesana.
Raphael: Hukama hweUbuntu -Debian hwaive hwakabatikana pakutanga, zvakatora makore akati wandei "kukura". Kana iwe waifanira kutanga patsva, iwe waizoita zvimwe zvinhu zvakasiyana?
Mako: Ehe, pane zvidzidzo zvinodzidziswa, asi hapana chimwe chazvo chakakosha. Kumwe kwekukakavadzana kwaive kwakavakirwa pazvinhu zvevanhu izvo zvisingakwanise kuchinjwa: vamwe vevashoropodzi vane utsinye paDD kubva kuCanonical neUbuntu vanhu vakanyorera asi vasina kusarudzirwa zvinzvimbo kuCanonical. Ini handikwanise kuchinja izvo, uye ini handidi kuzvishandura, uye ndinonzwisisa kuti mhedzisiro yacho, pamweya, ndizvo zvavari.
Zvisineyi, zvaive zvakanaka kuve nehungwaru nezve maitiro anoita vanhu kune dzimwe nzira. Takaenda zvinoshamisa kuDebConf 5 muPorto Alegre ndokupaza mukamuri yemusangano. Paive neakavhurika musuwo, uye vanhu vazhinji vakaisa misoro mukati, asi ini ndinofunga iyo isiri-yekumanikidza muunganidzwa wevanhu vaivapo yaityisa uye nyaya ikava yekuregererwa. Dai taida kuve vega taizoenda chero kumwe kunhu! Saka ndingadai ndakashanda nesimba kuti zvijeke izvo panguva iyoyo dai ndaiziva kuti kangani iyo nyaya yaizoshandiswa kupenda Canonical zvisina kunaka.
Kana zviri zvekukonana naDebian, ini ndinofunga mamiriro acho ndeemumwe wekukwira nekudzika. Sekunyoreswa, zvinowanzoita kuti ubatirane nechero Debian muchengeti pane imwe nyaya mune kufarirana. Kune zvisaririra, asi izvo zvinosarudzika zvakangonetsa mukati meDebian sezvazviri pakati peDebian nevokunze. Sevakuvara, hazvigoneke kubatana naDebian sechirongwa, nekuda kwekugadzirwa kwesangano.
Kuti vashande pamwe chete, mapato maviri anofanira kuita nekuchengetedza zvisungo. Saka nepo mugadziri weDebian uye mugadziri weUbuntu achigona kuzvipira kune mumwe nemumwe, Debian haakwanise kuzvipira kuUbuntu, nekuti hakuna munhu kana sangano rinogona kuita zvisungo zvakadaro pachinzvimbo cheiyo institution, pane chero mhando yeshungu mazwi. . A GR haina kukurumidza ;-). Ini handisi kutaura izvi sekushoropodza kwaDebian; Rangarira, ini ndinofunga Debian akaita sarudzo dzakakosha kwazvo, imwe yacho kuzvitonga kuzere kubva kune vanogadzira, zvinoreva kuti havana mvumo yekutevera danho rakaitwa nemumwe munhu.
Izvo zvakakoshawo kuti unzwisise mutsauko uripakati pekubatana pamwe nekubatana. Kana vanhu vaviri vaine chinangwa chimwe chete uye vachigadzira mhedzisiro, ndiko kubatana. Kana vanhu vaviri vaine zvinangwa zvakasiyana uye vachiuya nezvigadzirwa zvakasiyana, asi vachiri kuwana nzira yekuvandudza chigadzirwa chemumwe nemumwe, iko kubatana.
Saka kuve nekubatana kukuru pakati peUbuntu naDebian, isu tinofanirwa kutanga nekubvumirana kwekukosha uye kukosha kwemisiyano munzira dzedu. Kana mumwe munhu akatsoropodza Ubuntu nekuti iripo, kana nekuti isingaite zvinhu nenzira imwechete seDebian, kana nekuti isingagadzire maitiro ese nechinangwa chekutanga chekuvandudza Debian, zvinosuwisa. Misiyano pakati pedu yakakosha: Ubuntu inogona kutora Debian kunzvimbo Debian haigone, uye Debian debuts inounza yakakwana raft yemhando yeUbuntu.
Raphael: Nderipi dambudziko rakakura raDebian?
Mako: Kukakavadzana kwemukati pamusoro pechiratidzo chaDebian uye zvinangwa zvinoita kuti zviome kuumba nharaunda inoenderana, iyo inosanganiswa nekuzeza kugadzirisa hunhu hunoparadza.
Iyo Debian inoyera kubudirira kwayo nenhamba yekuisirwa? Nehuwandu hwevanochengeta? Nehuwandu hwemirazvo? Nehuwandu hwepakeji? Nenhamba yemameseji ezvinyorwa zvekugovera? Nekuda kwehunhu hweDebian Policy? Nekuda kwehunhu hwemapakeji? Nekuda kwe "kutsva" kwemapakeji? Yeiyo iyo nguva uye mhando yekuchengetedza kweinoburitsa? Nekuda kwehuwandu kana kushomeka kwekuburitswa? Nekuda kwehukuru hwezvinobva?
Mazhinji emametric aya ari kunetsana kwakananga nevamwe; Semhedzisiro, chokwadi chekuti akasiyana DD anoisa pamberi izvi zvese (nezvimwe zvinangwa) zvakasiyana zvinoita kuti gakava rifadze… Rudzi rwekupokana kunoenderera nekuenderera nekuti hapana nzira yekusarudza pakati pezvinangwa kana munhu wese aine zvinangwa zvakasiyana. Iwe unoziva mhando yekupokana yandinoda kutaura 🙂
Raphael: Iwe unofunga kuti nharaunda yeDebian yakavandudzwa mumakore manomwe apfuura? Kana hongu, iwe unofunga kuti kukwikwidzana neUbuntu kunozvitsanangura here?
Mako: Hongu, ndinofunga kuti dzimwe nzvimbo dzinondinetsa dzakagadziriswa. Zvizhinji zveizvi zvine chekuita nenguva yekupa vanhu mukana wekufunga zano kubva kune akasiyana maonero, pamwe nerubatsiro rwekukura. Nguva inobvumidza mazano kuyerera uyezve anounza vanhu vatsva mumusanganiswa. Kune akatiwandei maDD kunze uko izvo izvo maDD akagadzirwa mushure meUbuntu kuvapo, saka hazvina kuita seiyi nyowani supernova yakangoerekana yaputika munharaunda yako yegalactic. Uye mazhinji acho akazove maDD nekuda kweUbuntu. Saka zvirinani kubva pakuona kwehukama hweUbuntu -Debian, zvinhu zvine hutano.
Tinogona kuita zvirinani. Iye zvino zvatiri munzira yeanotevera akateedzana Ubuntu LTS kuburitswa, panguva mbiri-dzegore, zviri pachena kuti tinogona kubatana zvine mutsindo kana tikagovana zuva rekugwamba. Canonical yakapihwa kubatsira squezze pane iyo hwaro, asi kutya kwehukama kuzvipira kwakakura uye kupera. Uye nechisungo chekuisa chando chekutanga chakarongwa naDebian pakati chaipo peiyo Ubuntu LTS kutenderera, kuenderana kwedu kwezvido kunenge kuri padiki, kwete kwakawanda.
Raphael: Chii chaungakurudzira kune vanhu (seni) vasinganzwe kuda kujoina Canonical uye vangade kubhadharwa kuti vashande mukuvandudza Debian?
Mako: Isu tinogovana dambudziko; Ndinoda kubhadharwa kuti ndiite basa rekuvandudza Ubuntu, asi zvakare iroto rerefu- 😉
Raphael: Ko zvakadii nezvekushandisa zvakabuditswa zveiyo yakasara Ubuntu Foundation kubhadhara mamwe maDebian mapurojekiti?
Mako: Nheyo iripo muchiitiko chekutadza kweCanonical kuona izvo zvipikirwa, senge kuchengetedza kweLTS, kunozivikanwa. Vachave netariro yekurara nekusingaperi 😉
Raphael: Mushandirapamwe wekubhadhara mari weDebian Administrator's Handbook ichiri kuenderera uye ini ndakapfupikisa zvishoma mukana wekugadzira iyo Ubuntu Administrator's Handbook. Iwe unofungei nezve chirongwa ichi?
Mako: Crowfunding musanganiswa unoshamisa wemahara software uye zvakavhurika zvemukati, saka ndinovimba izvi zvinoshanda kwazvo kwauri. Ini zvakare ndinofunga ivo vaizowana musika wakakura webhuku reUbuntu, kwete nekuti Ubuntu chimwe chinhu chakakosha kupfuura Debian asi nekuti chingangove chinokwezva kune vanhu vanofarira kutenga kana kurodha pasi bhuku pane kudhizaina mukati maro.
Zvekare, izvi ndezvekunzwisisa misiyano muvateereri, kwete kutonga mapurojekiti kana zvigadzirwa.
Raphael: Pane chero munhu paDebian uyo waunoyemura nemipiro yavo?
Mako: Zack ndiyo yakanakisa DPL kubvira 1995; ibasa risingabviri raanobata nenyasha uye mutsauko. Ndinovimba kurumbidzwa kwangu hakukanganisa zita rako pachirongwa!
Kutenda kuna Maka nenguva yaakapedza kupindura mibvunzo yangu. Ndinovimba unonakidzwa nekuverenga mhinduro dzako sezvandakaita.
Chiuru chekutenda kuna Raphael yehurukuro chaiyo.
Kwaziso uye ... zvinonakidza kana kwete? 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Kubvunzana naMark Shuttleworth kuDebConf (2011)
Iyo yandakaita ndiyo chaiyo
Wakaita hurukuro naye here? rega tione ... ndiratidze, ndipe chinongedzo 🙂
Ini ndinofungidzira mabvunzurudzo acho.
Ushingi: Ndiudze Maka Kana iro gehena Ubuntu richazobvisa here?
Maka: Fuck iwe !!! Ubuntu ichave yekusingaperi.
Ushingi: Ubuntu rimwe zuva ndicharega ndichiishandisa ndisina zvipukanana here?
Maka: Iyo Bug haisi Ubuntu, iyo Bug ndiwe.
Ini handipfuure chinongedzo nekuti iwe unoti iwe unoshandisa hupenyu hwako hwese kurodhaunirodha
Mhoroi, ini handina kuverenga iyo kubvunzurudzwa, kana kupinda neiyo Kushinga kubvunzurudzwa, asi makomendi mukati mawo akatondiita kuti ndibude nekuseka. Nenzira, mudiwa Shinga, iwe wakakanganisa kukanganisa kubva kuGaara:
"Heino dudziro yeiyi bvunzurudzo, yakaitwa nababa vangu (aka Yuri516) saka, hazvidiwe kuti uiongorore, vanoziva chiRungu zvakawanda kupfuura zvandinoita, hapazove nekukanganisa HAHA".
Anodiwa Gaara: chirevo "chiripo", kubva pachiito chekuti kuva, kuratidza kuvapo, chinogara chiri chimwe chete, nguva dzose: "hapazovi nekukanganisa", "pakanga pasina zvikanganiso", "pakanga pasina zvikanganiso", "pakanga pasina zvikanganiso", "Panga pasina zvikanganiso", "hapana zvikanganiso", "pakanga / pakanga pasina zvikanganiso", zvichingodaro.
Iye zvino ndiri kuzoverenga iyo yekutanga kubvunzurudzwa uyezve iyo Kushinga kubvunzurudzwa.
Whoops! Ndine urombo ndakanganwa kuvhara masamanisi. Heh heh
Kudimikira uta nemuseve kwakanaka, he.
Ini ndinofunga zvakanaka kwazvo nzira iyo Mark Shuttleworth anotsanangudza kuzvimiririra kwaDebian uye nekunzwisisa kuti izvo zvinokosheswa mune yega yega zvinoita kuti zvive zvakasiyana asi kwete zvinopesana.
Tsigiro yenano kubva kuCSS, PHP, C / C ++, HTML, Python, nezvimwe.